ट्रम्पले अपमान गरेकाे राष्ट्रहरूकाे सूचीमा नेपाल पनि – Himalaya TV
Home » अन्तर्राष्ट्रिय » ट्रम्पले अपमान गरेकाे राष्ट्रहरूकाे सूचीमा नेपाल पनि
ट्रम्पले अपमान गरेकाे राष्ट्रहरूकाे सूचीमा नेपाल पनि
३० पुष २०७४, आईतवार १३:०८
काठमाण्डाै, ३० पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही अफ्रिकी देशहरू र नेपालबाट अमेरिका अाएका अाप्रवासीहरूबारे अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेर दिएकाे अभिव्यक्तिले संसारलार्इ चकित पारेकाे छ ।
उनले अपमानजनक भाषा प्रयाेग गरिएका देशहरूमा नेपाल पनि परेकाे छ । अफ्रिकाका केही मुलुकहरू लगायत नेपाल पनि अस्थायी रूपमा संरक्षित राष्ट्रहरूकाे सूचीमा पर्दछ । वि. स. २०७२ काे भूकम्पपश्चात् नेपाललार्इ पनि उक्त सूचीमा समावेश गरिएकाे थियाे ।
ह्वाइट हाउसमा सांसदहरूसँग भएको बैठकका क्रममा ट्रम्पले प्रश्न गरेका थिए, “किन ती देशका मानिसहरूलाई हाम्राे देशमा आउन दिनुपर्यो?” वासिंगटन पाेष्टले बताएअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले इंगित गरेका देशहरूमा हाइटी, एल-साल्भाडाेर, अन्य अफ्रिकी राष्ट्रहरू लगायत नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपालस्थित् अमेरिकी दूतावासले काठमाण्डाैमा अाफ्नाे ७० अाैं वर्ष मनाइरहँदा उसले नेपाललार्इ ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयाेगकाे घाेषणा गरेकाे थियाे । साेहीकारण पनि नेपाल ट्रम्पले अपमान गरेकाे उक्त देशकाे सूचीमा पर्नु स्वभाविक हाे ।
नेपालले पनि अमेरिकाबाट लिएकाे तुलनामा खासै दिन सकेकाे इतिहास छैन । मध्ये पूर्वी राष्ट्रहरूमा जस्ताे खनिज तेलकाे स्राेत नेपालमा छैन । त्यसकारण पनि ट्रम्पकाे उक्त सूचीमा नेपाल रहेकाे निश्चित् छ ।
ट्रम्पले हाल अमेरिकाले अस्थायी रूपमा संरक्षण दिंदै अाएका अाप्रवासीहरू र उनीहरूका गरीब मुलुकप्रति लक्षित गर्दै भद्दा शब्दकाे प्रयाेग गरी अपमान गरेका थिए । उनले स्पष्टसँग भनेका छन् कि अमेरिका नर्वेबाट नर्वेलीहरू अाऊन् भन्ने चाहन्छ । यसबाट पनि गरीब देशप्रति उनकाे फरक व्यवहार प्रष्ट हुन्छ ।
ट्रम्पकाे उक्त व्यवहारप्रति विभिन्न प्रतिक्रियाहरू अाएका छन् ।